ပေါ်လစီ | Danya Wadi
By danyawadi November 19, 2015 Leaveacomment
တစ်ကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ အခြေခံဥပဒေဟာ အစစ်အမှန်သမ္မတအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်မဟုတ်သေးဘူး။ အစစ်အမှန်သမ္မတအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဆိုတာ သမ္မတကိုပြည်သူလူထုက တိုက်ရိုက်ရွေးချယ်ပြီး အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ဆိုင်သမျှအာဏာအားလုံးကို အပြီးအပြတ်အပ်ရတယ်။ အဲဒီအခါကြတော့ သမ္မတဟာသူ့ရဲ့ အထက်မှာဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူး။ အုပ်ချုပ်ရေးမှာသူကအကြီးဆုံးပဲ။ သူ့က်ိုတစ်ယောက်ယောက်က ညွှန်ကြားလို့မရတော့ဘူး။ ဒါက သမ္မတအုပ်ချုပ်ရေးစနစ် အစစ်အမှန်ဆိုလျှင်တော့မှန်တယ်။ သို့သော် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လက်ရှိသမ္မတအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်က သမ္မတ ကို ပြည်သူလူထုက တိုက်ရိုက်မရွေးဘူး။ ပြည်သူလူထုက ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုရွေးတယ်။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုရွေးတယ်။ နှစ်ရပ်ပေါင်းလိုက်တော့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဖြစ်လာတယ်။ အဲ့တော့ ပြည်သူလူထုက ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ အမတ်မင်းတွေကနေပြီးတော့ နိုင်ငံတော်သမ္မတက်ို ရွေးကောက်ပြီးတာဝန်ပေးတာဖြစ်တယ်။ အဲ့တော့ နာမည်သာသမ္မတဖြစ်ပေမဲ့လို့ သူ့ကိုရွေးချယ်ထားတာ ပါလီမာန်ကနေ ရွေးချယ်ထားတာ။ လွှတ်တော်က ရွေးချယ်ခန့်ထားတဲ့ သမ္မတဖြစ်တဲ့အတွက် သူဟာလွှတ်တော်ရဲ့ အောက်မှာရှိနေတယ်…။ #ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ (၂၀၃)မှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကို တာဝန်ခံရမည်လို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကို ရေးသားထားပါတယ်။ […]
အခွင့်အခါသင့်၍ကြုံကြိုက်ချိန်တွင် နိုင်ငံတော်နှင့်နိုင်ငံ သား အကျိုးစီးပွား အတွက် စေတနာ၊ မေတ္တာ၊ သစ္စာ တို့ဖြင့် အားလုံး ပါဝင်ဆောင် ရွက်ကြ ပါစို့
By danyawadi November 11, 2014 Leaveacomment
အခွင့်အခါသင့်၍ ကြုံကြိုက်ချိန်တွင် နိုင်ငံတော်နှင့်နိုင်ငံသားအကျိုးစီးပွားအတွက် စေတနာ၊ မေတ္တာ၊ သစ္စာတို့ဖြင့် အားလုံးပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပါစို့ သူရဦးရွှေမန်းရေးသည် (၁၁-၁၁-၂၀၁၄) Tuesday, 11 November 2014 ၁။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်နိုင်ရေးအကောင်အထည်ဖော်မှုကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာအပေါ် လွှတ်တော် က ဆွေးနွေးအတည်ပြုရမည့်အချိန်ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ၂။ ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဝက်လက်မဲဆန္ဒနယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် သူရဦးအေးမြင့်က အဆိုတင်သွင်းပြီး မြစ်ကြီးနားမဲဆန္ဒနယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်ဦးသိန်းဇော်ကအဆိုကိုထောက်ခံ တင်ပြကာ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၏ တစ်ခဲနက် အတည်ပြုချက်အရ ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၃။ ၄င်းနောက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်နိုင်ရေး အကောင်အထည်ဖော်မှုကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းကာ ပြည်သူများ၊ပါတီများ၊ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အကြုံပြုချက်များ ရယူပြီးကော်မတီဝင်များနှင့် တက်ရောက်ခွင့် ရသောလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းချက်များမှ ထွက်ပေါ်လာသော အစီရင်ခံစာအပေါ် အပြုသဘောဆန်သော မူသဘောဆိုင်ရာဆွေးနွေးခွင့်များရရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ၄။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်အမျိုးသားညီလာခံမှ စတင်စဉ်းစားဆွေးနွေးခဲ့မှုအပေါ်အခြေတည်ခဲ့သည့် ဤဖွဲ့စည်းပုံ […]
သူငယ်ချင်း (၈) မျိုး (ဘယ်လိုသူငယ်ချင်းမျိုး လဲ)
(၁) ဆရာနဲ့တူတဲ့ သူငယ်ချင်း သူတို့က သင့်ကောင်းကွက်တွေ သင်ကိုယ်တိုင် သိမြင်နိုင်ဖို့ သင့်ကိုအမြဲကူညီအားပေးတယ်။ ဒီလို သူငယ်ချင်းမျိုးကို ဆရာအမျိုးအစားလို့ခေါ်တယ်။ သူတို့က သင့်ရဲ့ဆရာဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့မှာ အခြားဗဟုသုတ၊ အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ ပြည့်စုံတယ်။ သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်၊ မိသားစု၊ လူလူချင်း ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေမှာ သူတို့က သင့်ကို အကြံဉာဏ်တွေပေးနိုင် တယ်။ လူ့ဘဝမှာ ဒီလိုသူငယ်ချင်းမျိုးက သင့်စိတ်ကို ထောက်ကူပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။ သူတို့ဟာ သင့်အနားမှာ အမြဲရှိနေပြီး သင်အတုယူထိုက်သူလည်းဖြစ်တယ်။ (၂) ဖေးမကူညီတဲ့သူငယ်ချင်း သင့်ကို ဆုံးမလမ်းညွှန်ပြီး လူတွေရှေ့မှာ သင့်ကိုချီးမွမ်းစကားပြောတဲ့ သူငယ်ချင်း… ဒီလိုသူငယ်ချင်းမျိုးက “နင့် ငါ့ကိုကူ၊ ငါ နင့်ကိုကူ”ဆိုတဲ့ အချင်းချင်းကူညီအားပေးတဲ့သူဖြစ် တယ်။ ဘဝရှင် သန်ကြီးပြင်း ရာ လမ်းတစ်လျှောက်မှာ သူငယ်ချင်းရဲ့ ဖေးမကူညီမှု၊ ချီးကျူးမှုတွေက […]
By danyawadi June 9, 2014 Leaveacomment
ဘက်မလိုက် ဂျာနယ် အတွဲ (၁)၊ အမှတ် (၆)၊ မေ ၀၁၊ ၂၀၁၄ ​သရုပ်ဖော် ကာတွန်း – ဝေယံ (တောင်ကြီး) ​ မျိုးမြင့်စိတ်နေဝါဒ (Ethnocentrism) ဆိုတာ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဓလေ့ထုံးစံတူ လူမျိုးအုပ်စု တစုက အခြား မတူညီတဲ့ လူမျိုးအုပ်စု တစုကို ပြုမူဆက်ဆံရာမှာ မိမိရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတန်ဖိုး၊ စံနှုန်းတွေကို အဓိက ဗဟိုပြု လက်ကိုင်ထားပြီး စဉ်းစား၊ ဆုံးဖြတ် ပြုမူ လုပ်ဆောင်ခြင်း သဘောဖြစ်တယ်။ မူရင်း အင်္ဂလိပ် စကားလုံးက ရှေး ခေါမ စကားလုံး ‘Ethno’ (လူမျိုး၊ နိုင်ငံ၊ ယဉ်ကျေးမှုတူ အုပ်စု) နဲ့ လာတင် စကားလုံး ‘Centric’ […]
`ရခိုင်ပြည်နယ်က(ရိုဟင်ဂျာ)လူမျိုးများသည် တိုင်းရင်း သားများ ဖြစ်တယ်။´
By danyawadi April 14, 2014 Leaveacomment
ပူဆွေးမိသည် မွေးရပ်ဌာနီ(နေ) – ဆောင်းပါး -မွန်းတည့်နေ ဂျာနယ် `ရခိုင်ပြည်နယ်က (ရိုဟင်ဂျာ)လူမျိုးတွေ တိုင်းရင်းသားဖြစ်´ ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ (တိုင်းရင်းသား၊ နိုင်ငံသား) နှစ်မျိုးခွဲခြားသတ်မှတ်ရာမှာ မွတ်စ်လင်မ်ကလွဲလို့ ကျန်တဲ့လူမျိုးအားလုံး တိုင်းရင်းသားတွေလို့ အစိုးရက ဖွင့်ဟမပြောသည့်တိုင်အောင် ပကတိအနေ အထား က အဲဒီသဘောရှိနေပါတယ်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းကစပြီး မြန်မာမွတ်စ်လင်မ်တွေကို လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ခွဲခြားဆက်ဆံလာတာ ဘယ်သူမှ မငြင်းနိုင်ပါဘူး။ နိုင်ငံရေး အကျပ် အတည်းတွေဖြစ် တိုင်း အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေက မြေစာပင် ဖြစ်ခဲ့ဖူးပေါင်း များပါပြီ။ ယခု မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလမှာ တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ မိဘသဖွယ်ဖြစ် တဲ့ နိုင်ငံတော် အစိုးရအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းတွေအတိုင်း မြန်မာမွတ်စ်လင်မ်ကိစ္စကို ဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ရဲ့ မူဝါဒ (ပေါ်လစီ)ဆိုတာ နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူအားလုံးရဲ့ […]
ရခိုင်တွေ သမိုင်း အမှန်ကို ဖျောက်ပြီး ငါ့စကား၊နွားရ ဟူသော သမိုင်း ကို အခု လိုထောက် ပြခြင်း. – ၁ ရခိုင်တွေ သမိုင်း အမှန်ကို ဖျောက်ပြီး ငါ့စကား၊နွားရ ဟူသော သမိုင်း ကို အခု လိုထောက် ပြခြင်း. – ၂ ရခိုင်တွေ သမိုင်း အမှန်ကို ဖျောက်ပြီး ငါ့စကား၊နွားရ ဟူသော သမိုင်း ကို အခု လိုထောက် ပြခြင်း. – ၃ ရိုဟင်ဂျာမရှိဟု၊ရခိုင်ရေးသော ဗလောင်ဗလဲ သမိုင်း
သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ခံခြင်းနှင့်ပါတ်သက်၍ RNDP ပါတီ၏ သဘော ထား
By danyawadi March 5, 2014 Leaveacomment
RNDP ပါတီသည် သန်းခေါင်စာရင်း ဥပဒေကို လက်မခံ မိမိတို့ ထင်ရာစိုင်း အနိုင်ကျင့်ကာ နိုင်ငံတော်၏စီမံကိန်း ဖျက်စီး ရာဖျက် စီး ကြောင်း လုပ်နေသည်။ သန်းခေါင် စာရင်းကောက် ခံခြင်းသည် တိုင်းရင်းသား၊နိုင်ငံသား အသိအမှတ်ပြုခြင်း မဟုတ်ပေ။ လူဦးရေ စာရင်း ကောက် ခံခြင်းဖြစ်ကြော်င်း၊ ဥပဒေပြဌာန်းကာ လုပ်ဆောင်သည်ကို RNDP ပါတီ က လက်မခံဘဲ ရခိုင်ပြည်ရှိ မွတ်ဆလင်များ ကို ဘင်္ဂါလီဟု ရေးရန် အဓမ္မ တိုက်တွန်းခြင်းမှာ သန်းခေါင်းစာရင်း ဥပဒေကို ဆန့်ကျင်နေသည်။ မဟုတ်မတရားပြော ဆိုရေးသား ခြင်း၊ သဘောထားထုတ်ပြန် ခြင်းသည်လည်း နိုင်ငံတော်၏ လုပ်ရပ်ကိုမထီမဲ့မြင် လုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးများ၏ ကံကြမ္မာ သည် […]
By danyawadi February 28, 2014 Leaveacomment
ကနက်ရှင်မကောင်း၍စာမဖတ်နိုင်လျှင်အောက်ပါလင့်တစ်ခုခုကိုနှိပ်၍ဖတ်နိုင်ပါသည်။ View this document on Scribd Download here: Myo Saung Law
By danyawadi February 17, 2014 Leaveacomment
ဧရာဝတီ နိုင်ငံတကာ ပဋိပက္ခများ လေ့လာစောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့(International Crisis Group-ICG)က မြန်မာအစိုးရ နှင့် ကုလ သမဂ္ဂ အဖွဲ့ကို တနိုင်ငံလုံး အ တိုင်း အတာဖြင့် သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူမှုကို ပြန်လည် ပြင်ဆင်ပေးရန် တောင်းဆိုလိုက် သည်။ ကောက်ယူမှုတွင်ပါဝင်သော မေးခွန်းများသည် မ လို အပ်သော ဆန့်ကျင်ခြင်းများပါဝင်နေပြီး သဘောထားကွဲ လွဲမှုများ ဖြစ်စေနိုင်သည်ဟု ၎င်းတို့က ဖွင့်ဆိုခဲ့ကြသည်။ ဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုင်ငံ ဘရပ်ဆဲလ်မြို့တွင် အခြေစိုက်သည့် ICG အဖွဲ့က တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုများက လူမျိုး၊ ဘာသာနှင့် နိုင်ငံသား ဖြစ်မှု အချက် အ လက် များ ကောက်ယူခြင်းကို ရွှေ့ဆိုင်းပေးရန် တောင်းဆိုနေကြခြင်းကို ပဲ့တင်ထပ်လိုက်ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲရန်လည်း အချိန် နည်း […]